Booking.com Travel Deals 16.6.0.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 16.6.0.1 လြန္ခဲ့ေသာ 22 မိနစ္က
Application မ်ား ခရီးသြားျခင္း & ေဒသဆိုင္ရာ Booking.com Travel Deals
Booking.com Travel Deals ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သောခရီးသွား App ကို Download လုပ်များနှင့်ဟိုတယ်, မိုတယ်နှင့်အားလပ်ရက်အိမ်ပြန်ခရီးသွားအပေးအယူရှာဖွေတာကလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ join ။ တစ်ဦးကသင်၏အားလပ်ရက်များအတွက်နေထိုင်, တနင်္ဂနွေထွက်ပြေးဖို့သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးစဉ်သည်ကမ္ဘာ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှာဖွေလိုက်ပါ!
ဟိုတယ်, မိုတယ် & အားလပ်ရက်နေအိမ်ရှာရန်
• 1,5+ သန်းဂုဏ်သတ္တိများ: ဟိုတယ်များ, မိုတယ်, အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်ပိုပြီး
•ကိုယ့်တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူမြို့, ဆွဲဆောင်မှု, မြေမှတ်တိုင်သို့မဟုတ်ဟိုတယ်နာမတော်ဖြင့်ရှာရန်
•စျေးနှုန်းပြန်လည်သုံးသပ်ရမှတ်, Wi-Fi ရညျအသှေးနှငျ့သငျဖို့အရေးကြီးတယ်သည်အခြားအမှုအရာအားဖြင့် Filter ကို
• 135+ သန်းမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုဧည့်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Browse
•အပြောင်းအလဲများကိုအခါတိုင်း, နေရာတိုင်းမှာ Make
• 40 ကျော်ဘာသာစကားများ 24/7 ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု
Booking.com Travel Deals အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Booking.com Travel Deals အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Booking.com Travel Deals အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Booking.com Travel Deals အား အခ်က္ျပပါ
andronoid စတိုး 9.1k 1.09M
Booking.com Travel Deals ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Booking.com Travel Deals အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 16.6.0.1
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.booking.com/content/privacy.nl.html?
App Name: Booking.com Travel Deals
Release date: 2018-12-14 04:15:58
လက်မှတ် SHA1: 9C:9F:BE:25:8A:14:6B:E8:3A:4A:0F:1C:B6:4B:E9:6A:13:79:03:24
အဖွဲ့အစည်း (O): Booking
Booking.com Travel Deals APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ